RW Saacid ?kobcinta dhaqaalaha iyo is-gaarsiinta ayaa qayb ka ah dagaalka ka dhanka Argagixisada? – Radio Daljir
Nofeembar 5, 2013 2:31 b 0
Muqdisho, November 5, 2013 – Ra?isal wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdi faarax shirdoon ayaa amaanay horumarka laga sameeyey dagaalka lagula kooxda Al-shabaab ee gacanta ku haysa meelo ka mid ah Soomaaliya, waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in la dhamaysitiro dagaalka ka dhanka ah ururka.
Mudane Shirdoon waxaa uu sheegay in dagaalka lagula jiro kooxda guulo waa wayn laga gaaray.
Ra?isal wasaaraha wasaare shirdoon waxaa uu hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro Al-shabaab uu noqon doono mid balaaran oo hub keliya looga qayb-qaadan doonin, waxaa uu xusay in diirada la saari doono dhinacyada waxbarashada, isgaarsiinta iyo dhaqaalaha.
?Waxbarashada oo la horumariyo, dhaqaalaha oo la kobciyo iyo isgaarsiinta oo horumar laga sameeyo, waxay qayb ka noqon doonaan in dalka laga sifeeyo kooxda Al-shabaab ee dagaalka nagula jirta.? Ayuu ra?isal wasaare shirdoon ka sheegay kulan uu shalay la qaatay wefdi ka socday Denmark.
?Keliya loogama guulaysan karo hab meleteri? ayuu hadalkiisa ku sii daray ra?isal wasaaraha Soomaaliya
Xog-hayaha arrimaha debeda iyo kaaliyaha horumarinta siyaasada ee Denmark iyo xubno kale oo uu ku jiray safiirka dalkaas ee Soomaaliya ayaa ra?isal wasaare shirdoon kula kulmay Muqdisho gelinkii dambe ee shalay, waxaa uu Denmark uga mahad-celiyey doorka ay ku leedahay dib u soo kabashada Soomaaliya.